PAGE Peeji ERCOLANI MONTEPULCIANO - cellar Ercolani Montepulciano
ỌR U EGO
OLIVE GR GRES
ANYA ANYA BISHOP
Ọrụ na ozi ọma
AKW SHKWỌ nri
PAGE Peeji ERCOLANI MONTEPULCIANO
Mmasị nke malitere na 1940 ...
Akụkọ banyere ezinụlọ Ercolani ọ bụ akụkọ banyere ndị mgbere na ndị na-ere ahịa nke ụlọ ahịa na ebumnuche ha. Ọ bụ akụkọ nke ndị hụrụ ala ha na ala ha n'anya mara ihe nzuzo, na-enwe ekele maka ụtọ, na-atọ ụtọ.
AKW SKWỌ SALES
Ebe a na-ere ahịa nke ụlọ ọrụ dị ebe a dị site na di Gracciano na Corso 82 na Montepulciano. You nwere ike ịchọta mmanya, vin santo na mmanya siri ike, mmanụ, akwa, salami na tomato.
Anyị na-arụkwa nkwadebe nke nkata na igbe onyinye.
NWA OBODO NA OBULA
Pamper gị palate .. nke a bụ oké ihe ịma aka ezinụlọ Ercolani na na njiri mara n'okpuruala City ga-atụ gị n'anya!
Obere anụ ụtọ n'efu ga na-anabata gị oge niile maka nlele nke nri anyị na ngwaahịa mmanya anyị ebe anyị nwere nnukwute uto, anyị nwere ike ịhazi ụtọ ndị akọwapụtara site na ndobere; mekwara ndi di iche iche.
NKWUP ANDTA NA EGO
Ezinụlọ Ercolani ọ na-enyekwa ohere ịga njem nlegharị anya ma nwalee ahụmịhe nke nri na mmanya: uto nke Vino Nobile di Montepulciano, grappa na DOC vinsanti na nhọrọ anụ, chi, mmanụ na mmanya; njegharị njem nke obodo na nzuzo; njem mmụta na-achọ ụgbọala; ikere ihe n’oge owuwe ihe ubi; soro ihe omume n’ime obodo ime njem gaa n’ala ụlọ ọrụ.
Ihe kacha adọrọ mmasị anyị bụ ihe anya anyị na-ahụghị.
Nọrọ anyị nso
okwu: Site na Gracciano del Corso 82
53045 Montepulciano (SI): Ọrụ a na-ewu
Ekwentị na Faksị: + 39 0578716764
email: info@ercolanimontepulciano.it | ugbo.ercolani@ pec.it
Oge ọrụ: Na-emeghe mgbe niile
ewezuga n’ụbọchị ekeresimesi
Site na ịga n'ihu ị ga-anabata iwu nzuzo
EGO NA MONTEPULCIANO
Soro anyi na
PI 00755780525 | PEC: ọrụ ugbo.ercolani@ pec.it - ​​© nwebiisinka 2019-2022 Ikike niile echekwabara. - Powereb site na Puntoweb Arezzo